विचार Archives – Kalika News
सरकारलाई लकडाउनमा भ्रष्टाचार गर्नकै चटारो
बिजयराज अधिकारी कतार , चैत्र २१ बिश्वभर कोरोना भाइरस को संक्रमण लाई लिएर चिन्ता र चासो बढिरहेको समय मा नेपाल ले मुलुक लकडाउन गरेर नियन्त्रण तथा रोकथाम का लागि पहल त गर्यो तर यहि शुन्यता मा चरम भ्रस्टाचार को मौका मा चौका हान्न पनि पछि परेन । कोरोना भाइरस ले बिश्व त्रसित भएका समयमा पनि नेपाल कोरोना भाइरस मुक्त देशका रुपमा प्रचार गराउदै भ्रमण बर्ष लाई नै प्राथमिकता दिएको सरकारले जनताको...
चैत्र १३ डा. ढुण्डीराज पौडेल परिक्षणको आधारमा संख्यात्मक रुपमा अहिलेसम्म कोरोना पोजिटिभहरु कम देखिए पनि विशेषगरि केही दिन देखि भारतबाट दशौं हजार नेपालीहरुले नेपाल प्रवेश गरेको हुनाले स्थिति सोचेभन्दा भयावह हुन सक्छ । भारतमा अवको केही हप्ता अत्यन्तै संबेदनसिल रहेको अनुमान गरिन्छ जस्को प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पर्ने निस्चित छ ।पंक्तिहरु लेख्दासम्म भारतमा ५६२ पोजिटिभ र नौ जनाको मृत्यु भएको छ ।भारतमा अन्यत्रको भन्दा संक्रमण दर न्यून छ ।कोरोनाको अन्तर्राष्ट्रिय मृत्युदर...
खेम थपलिया, ५ चैत, २०७६ आज चैत ५ । २२ औँ सांस्कृतिक प्रतिरोध दिवस ! माओवादी धारका विभिन्न घटक यतिबेला धुमधामका साथ सांस्कृतिक प्रतिरोध दिवस मनाउने तरखर गरिरहेका छन् । जनताका उच्च बलिदान, साहस, शौर्य र सपनाको भावधारामा लतपतिँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरिरहेको भीषण वर्गसङ्घर्षका बिच सांस्कृतिक प्रतिरोध दिवस मनाउनुको विशेष महत्व रहेको छ नै । सांस्कृतिक प्रतिरोध दिवसको सन्दर्भमा यतिबेला विभिन्न ठाउँबाट निम्तो पनि आइरहेको छ । सापेक्षित उत्साहजनक...
किसान हकअधिकार संरक्षणका लागि आशाको धरोहर राष्ट्रिय किसान आयोग
रिता बस्ताकोटी राष्ट्रिय कृषक समुहमहासंघ नेपालको महासचिब तथा आई.पि.एम. कृषक सहजकर्ता यहिमिती २०७६ माघ २७ र २८ गते चितवनको ठिमुरामा पहिलो पटक राष्ट्रिय किसान आयोगले आयोजना गरेको औपचारिक कार्यक्रममा सहभागीहुने अवसर पाएको आयोजकलाई धन्यवाद दिदैं दुई दिनको अनुभवसबै जनासँग सेयर गर्न मन लागेर लेख्दै छु । हुन त दुईवर्ष अगाडी पनि एक दिनको कार्यक्रममा दर्शकको रुपमा राष्ट्रिय किसान आयोगको कार्यक्रममा सहभागीभएको थिए । त्यसलाई खासै प्राथमिकतामा राखिन मैले । तर यस पटक...
नेपालको सीमा भारत सित जोडिएका २६ जिल्लाहरु मध्ये धनुषा, बैतडी र डडेलधुरा वाहेक २३ जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा विवादको अवस्था छ । सीमा विवाद व्यवस्थापनका लागि दुवै देशको कूटनीतिक र प्राविधिक तहमा काम भई रहेको पनि छ । समाचार माध्यमहरु बाट प्रकाशमा आए अनुसार झण्डै ९८ ५ सीमा व्यवस्थापन भई सकेको र २ ५ जति मात्र सीमा व्यवस्थापनको कार्य वाँकी रहेको छ । जस मध्ये सुस्ता क्षेत्र र कालापानी क्षेत्र...
मुकुन्द भुसाल, कालिका न्युज, असोज ४ । सर ! के हो यसको अर्थ ? कसलाई कस्तो अवस्थामा ‘सर’ भनेर सम्बोधन गर्ने ? कतै हामीले यसको गलत प्रयोग गरिरहेका त छैनौं ? मँ दंग पर्छु । समाजका गन्यमान्यहरु लाई नाम लिएर बोलाईयो भने सम्बन्धै बिग्रेला भन्ने डर । उनीहरु अपमानित भएको अनुभव गर्छन् । अरु त के म आँफै पनि त्यस्तै ‘फिल’ गर्छु । मलाई पनि सम्मान खान मन पर्छ । अनि कसैले...
बन्दुकसहित तैथान प्रहरी, प्लेकार्डका साथ सेता कोटधारी विद्यार्थी, विद्याको मन्दिरमा पटक–पटक झडप । चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी) परिसरमा बुधबार दिनभर यिनै दृश्य दोहोरिरहे । व्यस्त सडकमा हिँडेका यात्रुदेखि अस्पतालमा उपचारका लागि आएका बिरामीसम्म अचम्मित थिए, यिनै दृश्य देखेर । सिएमसीमा अध्ययनरत विद्यार्थी ८ बुँदे माग राखेर १७ भदौदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छन् । कलेजका सबै संकायका विद्यार्थी, इन्टरनल विद्यार्थी, रेजिडेन्ड मेडिकल डाक्टरले समेत काम गर्न छाडेर आन्दोलनलाई साथ दिएका छन् ।...
बसन्त ढुंगाना । सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेलाई भेट्न अधिकांश मानिसहरु ईच्छुक हुन्छन् । उनलाई भेट्न इच्छुक हुनेहरु जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा धेरै भेटिन्छन् । तर, त्यहाँ पहुँचवाला व्यक्तिले मात्र सहज रुपमा भेट्न सक्छन् । अधिकांशलाई प्रहरीले गेटबाट नै फिर्ता गरिदिने गरेको छ । अहिले मानवअधिकारकर्मी तथा व्यवसायीले सहज रुपमा रविलाई भेटिरहेको पाईन्छ । तर, उनका आफन्तले भने, त्यती सहज रुपमा भेट्न पाएका छैनन् । बाग्लुङबाट रविसंगै हिरासतमा रहेका युवराजलाई भेट्न आएकालाई...
नारीबाट नै महान आत्माहरूको जन्म हुन्छ
अरविन्द कुमार यादव नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश नं. २ का सरकारले आफनो प्रथम काम “बेटी पढाउ, बेटी बचाउ” अभियान संचालन गरेर श्रीगणेशाय गरेको छ । जसको चारैतिर प्रशंसा नै प्रशंसा भएको छ । हाम्रो समाज निर्माणमा नर र नारीको समान भूमिका भए पनि पुरूष र महिला एउटै गाडीको दुई पाङ्गा भए पनि पितृसतात्मक व्यवस्थाका कारण महिला सधै उपेक्षित, अपहेलित र शोषित हुँदै आइरहेका छन् । एउटा भारतीय कविले महिलाको दुःख...
नेकपामा देखिएका असन्तुष्टिहरु परिस्थितिको उपज
अजयशंकर नायक दुईवटा ठूला कम्युनिष्ट पाटी आ–आफ्नै भूमिकाले आ–आप्mनै परिवेशमा स्थापित भएका पार्टी थियो । दुई पार्टीबीच एकीकरण गर्र्ने विषय विगतमा धेरै नै जटिल देखिएको थियो र यी दुई पार्टीबीच एकीकरण हुन्छ भनेर कसैले सोचेका पनि थिएनन् । तर, दुवै दलको नेतृत्वपंक्तिको प्रयासले एकीकरण सम्भव भयो । अबका दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा सबै कार्यसमितिबीच एकता भईसकेपछि विचार विश्लेषण भईसकेपछि पार्टी एकताको अर्थ लाग्नेछ । अहिले धेरैजसो विषयहरूमा बहस...